मलाई त बीरेन्द्र र दीपेन्द्र साह्रै मन पर्थ्यो, हजुरलाई नि ? - Dainik Nepal
मलाई त बीरेन्द्र र दीपेन्द्र साह्रै मन पर्थ्यो, हजुरलाई नि ?
मीनबहादुर पण्डित २०७५ मंसिर ७ गते १४:३८
बीरेन्द्रको पालामा पञ्चायतमार्फत देस विकास खासै हुन नसकेपनि सोझा राजा भएका कारण बीरेन्द्र र दीपेन्द्र जनतामाझ सारै लोकप्रिय थिए । पञ्चायतको कुरा छोडौ, अहिले झन् पञ्चायतको भन्दापनि धेरै भ्रष्टचार छ । अहिले चाहीँ राजनीति गरेर कुन नेता करोडपति भएनन् ? अहिले सरकारसँग वार्षिक ९ खर्बजतिको बजेट छ । तर, सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीको ठेकेदारसँगको मिलेमतो/फितलो अनुगमनका कारण गुणस्थरहिन विकास निर्माण हुन्छन् । अर्बौँ खर्चेर बनाएको अधिकांश पीच एक बर्षपनि टिक्दैनन् । जबकी पञ्चायतको पालामा अर्ब/खर्बको कुरा छोडौँ करोडको मात्र बजेट हुन्थ्यो । विकास हुन नसकेपनि राजतन्त्र हाम्रो एकताको प्रतीक थियो । हाम्रो गौरव र पृथ्वीनारायण शाहको वंशको इतिहास थियो ।
भारतकै कारण बीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव तुहिइएको थियो । किनकी उसलाई नेपाल क्रान्ति क्षेत्र बनाउनु थियो । त्यसैले नेपालमा क्रान्ति सुरु गराउने पनि भारत, शान्ति प्रक्रिया सुरु (१२ बुँदे) गराउने पनि भारत ।
नेपालको सीमा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा पुर्‍याएको इतिहास बिर्सिन सकिन्न । पुर्खाको योगदान कदापी बिर्सन सकिन्न । कालापानी/नालापानीको युद्ध कुनै काल्पनिक कथा होइन, वास्तविकता थियो । यदि भारतमा ब्रिटिश मात्र नआइदिएको भए दार्जिलिङ/सिक्कीमलगायत आधा भारत नेपालको हुने थियो । उनीहरूले भूगोल जोडेर देश निर्माण गरे । देश बनाउने जिम्मा र कर्तव्य अबको पुस्ताको हो । अर्काे कुरा बीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव भारतले किन मानेन ? जबकी चीनलगायत ७५५ देशले मानिसकेको थियो । भारतकै कारण बीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव तुहिइएको थियो । किनकी उसलाई नेपाल क्रान्ति क्षेत्र बनाउनु थियो । त्यसैले नेपालमा क्रान्ति सुरु गराउने पनि भारत, शान्ति प्रक्रिया सुरु (१२ बुँदे) गराउने पनि भारत ।
राजा बीरेन्द्र फाल्न क्रान्ति सुरु गराइएको थियो । बीरेन्द्र नै मारिएपछि अब शान्ति प्रक्रिया सुरु गराउँदा फरक पर्दैन भन्ने निचोडमा भारत सरकार र भारतीय रअ पुगेका हुन् । बीरेन्द्र नमारिउन्जेल भारत नेपालमा शान्ति होस् भनि टोपल्ने तर ठोस सहयोग भने पटक्कै नगर्ने नीतिमा थियो । भारतको हात नभएको भए माओवादी नेता भारतमा बस्न कसरी सके ? यदि भारतले चाहेको भए भारतीय रअले माओवादी नेता बसेको ठाउँ सजिलै पत्ता लगाउने सामर्थ राख्छ र पत्ता लगाउन पनि सक्थ्यो । कुन मावोवादी नेता भारतमा पक्राउ परे ? प्रचण्डलाई भेट्न एमाले नेता धेरैचोटी भारत गएको र भेटेको कुरा जगजाहेर नै छ । तत्कालीन माओवादी नेता भरत दाहालले भनेअनुसार प्रचण्ड–बाबुराम भारत सरकारको गेस्ट हाउसमैँ बस्थे । त्यसैले माओवादीले कुनै चमत्कार गर्न क्रान्ति गरेको थिएन, भारतको चाहनाअनुसार क्रान्ति सुरु भएको थियो । नत्र शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेपछि माओवादी ५ चोटी सरकारमा पुगिसक्यो खै त चमत्कार ? भारतको सहयोगबिना माओवादीले सशस्त्र र नेपाली सेनालाई टक्कर दिन सम्भव थिएन ।
नेपालमा राजा बीरेन्द्र मारिएपछि माओवादी क्रान्तिको अन्त्य भएको हो । किनकी क्रान्तिको मूल उद्देश्य नै बीरेन्द्रलाई हटाउनु थियो । नत्र सारा नेपाली जनताले मन पराएका लोकप्रिय राजा बीरेन्द्रका विरुद्ध क्रान्ति गर्नुको अर्थ के थियो ?
नेपालमा मात्र होइन श्रीलंकामा एलटीटीई सुरु गराउने पनि भारत नै थियो । (भारतीय गलत नीतिका कारण तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीलाई श्रीलंका भ्रमणमा जाँदा श्रीलंकन आर्मीका एक जवानले बन्दुकको नालले हिर्काएको भिडियो युट्युबमा हेर्न सकिन्छ ) श्रीलंकामा सेना, विद्रोही र सर्वसाधारण गरेर ६० हजारले ज्यान गुमाए, धेरै मान्छे घाईते पनि भए । नेता प्रभाकरण सैनिक कारवाहीमा मारिएपछि केहि वर्ष अगाडी श्रीलंकाको गृहयुद्धको विधिवत अन्त्य भएको थियो । नेपालमा १७ हजार निर्दोषले ज्यान गुमाए । नेपालमा राजा बीरेन्द्र मारिएपछि माओवादी क्रान्तिको अन्त्य भएको हो । किनकी क्रान्तिको मूल उद्देश्य नै बीरेन्द्रलाई हटाउनु थियो । नत्र सारा नेपाली जनताले मन पराएका लोकप्रिय राजा बीरेन्द्रका विरुद्ध क्रान्ति गर्नुको अर्थ के थियो ? जनभावना अनुसार प्रजातन्त्र र शासनसत्ता जनताको हातमा दिएर तथस्ट बसेका राजालाई देश विकास नहुनुमा किन दोष ? त्यस्ता राजा फाल्न जनयुद्ध गर्नुको अर्थ के हुन सक्ला ?
बीरेन्द्रले राजा भएको ८ वर्षमै २०३६ सालमा जनचाहना अनुसार जनमत संग्रह गराएकै हुन्, त्योबेला पञ्चायतविरुद्ध झिनो मतले बहुदलीय व्यवस्था पराजित भएको थियो । त्यसकारण प्रजातन्त्र नभई देशमा निरंकुश व्यवस्था भएको भए पो माओवादी जनयुद्धको अर्थ रहन्थ्यो । त्यो जनयुद्ध राजाविरुद्ध होइन काँग्रेस र एमाले विरुद्ध हुनुपर्ने थियो । अर्काे कुरा बीरेन्द्र मारिएपछि काँग्रेस, एमालेलगायत ७ दलसँग मिलेर माओवादीको प्रत्यक्ष सहभागिता र समर्थनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध ६२/६३ को आन्दोलन भएको थियो । १९ दिन त लगातार कर्फ्यु नै लागेको थियो । व्यापक जनआन्दोलनको दवावमा ज्ञानेन्द्र प्रजानन्त्रत फर्काउन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजा हटाउने निर्णय गरेको थियो । राजा बीरेन्द्र नमारिएको भए नेपालमा कुनै माइकलालले गणत्रन्त ल्याउन सक्ने थिएन, किनकी बीरेन्द्र/दीपेन्द्र जनतामाझ लोकप्रिय थिए । यदि ज्ञानेन्द्र/पारसपनि जनतामाझ लोकप्रिय भएका भए देशी, विदेशीले चाहदैमा राजतन्त्र फ्याक्न गाह्रै पर्थ्यो ।
राजनीतिक पार्टीले गरेका सबै काम राम्रा अनि राजाले गरेका सबै काम नराम्रा भन्ने पनि हुन्छ र ? त्यसकारण दलको राजनीति र राजाको राजानीति जस्तो भएपनि मलाई त बीरेन्द्र र दीपेन्द्र सारै मन पर्थ्यो, हजुरलाई नि ?
अर्काे कुरा गणत्रन्तले चाहीँ देश र जनतालाई दियो के ? गणतन्त्रले ६० लाख विदेशिएका नेपाली फर्काउन सक्यो ? राजनीतिक पार्टी र नेतालाई राजतन्त्र मन परेन भन्दैमा जनता राजतन्त्रको शत्रु बनिदिनुपर्ने आसय सहि होइन, किनभने राम्रो काम जसले गरेपनि राम्रो भन्नुपर्छ र नराम्रो काम जसले गरेपनि नराम्रो नै भन्नुपर्दछ । राजनीतिक पार्टीले गरेका सबै काम राम्रा अनि राजाले गरेका सबै काम नराम्रा भन्ने पनि हुन्छ र ? त्यसकारण दलको राजनीति र राजाको राजानीति जस्तो भएपनि मलाई त बीरेन्द्र र दीपेन्द्र सारै मन पर्थ्यो, हजुरलाई नि ?
पीत पत्रकारिता, प्रीत पत्रकारिता !